Ciidamada Kumaandooska oo ka fuliyay howlgal gaar ah gobolka Sh/hoose – STAR FM SOMALIA
Abaan-duulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Cali baashi ayaa sheegay in howlgalo gaar ah oo ay ciidamada kumaandoorska ka fuliyeen gobolka Shabelaha Hoose ay ku dileen sarkaal ka tirsan ururka Alshabaab.
General Cali Baashi oo u waramayay wakaalada wararka Soomaaliyeed ee SONNA ayaa sheegay in howlgalkan ay ku dileen Xasan Cali Dhoore oo ka mid ah saraakiisha ururka Alshabaab ee u qaabilsan amniyeedka iyo weliba dagaalaalyahano kale oo ka tirsan Alshabaab.
Taliyaha ayaa sheegay in horjoogahaas oo mudaba ladaba socday lagu dilay hawlgalkaan oo ay fuliyeen ciidamada sida gaarka ah utababaran ee Kumaandooska Xoogga Dalka Soomaaliyeed.
Horjoogahaan ayaa waxaa horay madaxdiisa lacag u duldhigtay dowladda Soomaaliya,wuxuuna Madax ka ahaa qaybta Amniyaatka ee Alshabaab oo ah kuwo fuliyay dilalka qorshaysan. Hawlgalkaan ayaa ah kii labaad oo maalmo kooban gudahood ay ay Kumaandoosku ka fuliyaan Shabeellaha hoose.